Ungasindiswa njani ngokweBhayibhile ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ungasindiswa njani ngokwebhayibhile. Xa sithetha "ngokusindiswa," sithetha njalo usindiso lomphefumlo wethu. Kuwo nawuphi na umKristu, ukufumana usindiso kufanele kube yeyona njongo iphambili yobomi bakhe. Nangona kunjalo, abaninzi bakholelwa ukuba ngabantu abalungileyo baya kuyifumana. Akukho nto iqhubekayo kwinyani!
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungasindiswa njani, eyona nto ingcono sinokuyenza Khangela iimpendulo eBhayibhileni.
1 Ungasindiswa njani ngokweBhayibhile: Kufuneka wenze ntoni?
2 Ndingalufumana njani usindiso?
2.1 1. Ziqonde iziphene zakho uze ufune ukutshintsha
2.2 2. Thobela imiyalelo kaThixo
2.3 3. Kholelwa ukuba uYesu walihlawulela
2.4 4. Mqonde uYesu njengoMsindisi wakho
2.5 5 Qhubekani nihamba ngendlela yeNkosi
Ungasindiswa njani ngokweBhayibhile: Kufuneka wenze ntoni?
Ndingazi njani ukuba ndisindisiwe ngokwebhayibhile
Ukufezekisa usindiso, kufuneka kuqala kholelwa ukuba uYesu ungumsindisi wakho. Akukho nto unokuyenza ukuze uzuze usindiso, kuba uThixo uyinikela simahla. Kufuneka usamkele nje esi sipho ngokusuka entliziyweni.
Ukuba ngenene ufuna ukusindiswa, sele usendleleni elungileyo. Oko kuthetha ukuba uThixo ukubizile. UYesu usixelele ukuba kufana nomntu onkqonkqoza emnyango wakho; ukuba uyayivula kwaye uyingenise ngaphakathi, uya kuba yinxalenye yobomi bomnye nomnye nako konke okubandakanya.
Yabona, ndimi emnyango ndinkqonkqoza; Ukuba nabani na uva ilizwi lam aze avule ucango, ndiza kungena kuye ndize ndidle naye, naye adle nam.
ISityhilelo 3: 20
Ke ngoko, konke okufunekayo ukufumana usindiso wamkele uYesu entliziyweni yakho. Kodwa kuthetha ntoni ukwamkela uYesu entliziyweni yakho?
Ndingalufumana njani usindiso?
1. Ziqonde iziphene zakho uze ufune ukutshintsha
Akukhomntu ogqibelele. Sonke siyazenza iimpazamo. Le yinxalenye yendalo yethu yobuntu, kodwa yingxaki enkulu. Izinto ezimbi esizenzayo kuthi sizenzakalise thina kunye nabo basingqongileyo. Ibhayibhile ikwatsho ukuba iimpazamo zethu zizisa ukufa kunye nomgwebo ongunaphakade.
Kuba umvuzo wesono kukufa, kodwa isipho sikaThixo bubomi obungunaphakade kuKristu Yesu iNkosi yethu.
AmaRoma 6: 23
Xa unengxaki, kuyindalo ukuba ufuna ukuyisombulula. Inkqubo ye- Inyathelo lokuqala elusindisweni kukwamkela ukuba uneziphene, ukuba uzive ungonwabanga kwaye ufuna ukuphila ngokwahlukileyo. Oku kubizwa inguquko.
2. Thobela imiyalelo kaThixo
Ibhayibhile ithi wadalwa ngendlela ekhethekileyo nguThixo. Uyakuthanda kwaye akafuni ukukubona usokola. Nangona kunjalo, nangona enamandla onke, uThixo uyakuvumela ukuba ukhethe ukuba uyamthanda okanye awumthandi. Akunyanzeli ukuba uthobele. Kodwa xa wenze impazamo, ukhathaza uThixo.
Kuba andifuni ukufa itsho iNkosi uYehova; ke ngoko ziguqule, uphile.
UThixo wenza imithetho ukuze kulunge kuwe. Xa uthobela, ufumanisa indlela engcono yokuphila. Kodwa xa ungathobeli, kubangela ingxaki enkulu kwi el mundo. Ke ngoko UThixo usebenzisa isohlwayo ukubuyisela Ubulungisa. Kodwa uThixo akakuthandi ukohlwaya yaye ufuna ukuxolela.
3. Kholelwa ukuba uYesu walihlawulela
Ingxaki kukuba kufuneka usebenzise isohlwayo. Imisebenzi elungileyo oyenzayo ayizenzeli ezimbi. Umzekelo, umbulali akanakukwazi ukuhlawulela ubomi awabuthathayo ngokusindisa abanye. Ityala likhulu kakhulu ukuba lingahlawulwa kobu bomi. Iziphumo zezenzo zakho azinakubalwa, ke isohlwayo sikanaphakade.
Kuba nabani na oya kuwugcina wonke umthetho, kodwa akhubeke kwinto enye, unetyala layo yonke. Kuba lowo wathi, Musa ukukrexeza, ubuye wathi, Musa ukubulala. Ukuba akukrexezi, kodwa ubulala, sele ungowaphuli mthetho.
UYakobi 2: 10-11
Kodwa UThixo ugqibe kwelokuba akuhlawuleleUThixo weza emhlabeni njengendoda, egama linguYesu, kwaye wadlula kuyo yonke into esihamba kuyo, kodwa akazange one. Emva koko wanikela ngokufa endaweni yethu, emnqamlezweni. Kuba uThixo ugqibelele kwaye ungunaphakade, idini awalenzayo laligqibelele kwaye likanaphakade. Uhlawule ixabiso lezono zonke.
Kwaye kwindlela emiselwe ukuba abantu bafe kube kanye, kwaye emva koko ityalaNgokunjalo naye uKristu, esondezwe kwaba kanye, ukuba athwale izono zabaninzi; Kwaye uya kuvela okwesibini, engahambelani nesono, asindise abo bamlindileyo.
Hebhere 9: 27-28
4. Mqonde uYesu njengoMsindisi wakho
Ngoku ke isohlwayo sesono sihlawulwe. UThixo unika usindiso simahla. Yima nzu, akanyanzeli mntu ukuba amkele. Kuphela abo bakholelwa kuYesu kwaye bamamkele njengomsindisi wabo, beguquka ezonweni zabo, baya kusindiswa.
Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.
Ukwamkela uYesu njengomsindisi wakho kukuvulela ithuba lokuba angene ebomini bakho. Ingathi uyafa kwaye unikwe ubomi obutsha, ngaphandle kwesigwebo. Oku kuthi zibophelele ukulandela uYesu kwaye uphilele yena. Emva koko ubomi bakho buza kutshintsha!
5 Qhubekani nihamba ngendlela yeNkosi
Ukuba usenzile isigqibo sokukholelwa kuYesu, Siyavuyisana nawe! Kukho itheko ezulwini lakho. Kodwa ayipheleli apha. Ngoku ubomi bakho buya kwahluka. Ibhayibhile ithelekisa usindiso nokuzalwa kwesibini. Ngoku kufuneka ukhule.
Ngenxa yoko ndithi kuni, kubakho uvuyo phambi kweengelosi zikaThixo ngomoni oguqukayo.
Usindiso ayisosigqibo osithatha ngolunye usuku kwaye uphelele apho. Yindlela entsha yokuphila noYesu. Thetha noThixo (umthandazo), funda iBhayibhile, kwaye uzame ukunxibelelana namanye amakholwa. Kwaye uThixo uya kuhlala enawe, ngonaphakade.
Kube njalo! Ndiyathemba ukuba uyayiqonda indlela yokusindiswa ngokutsho kweBhayibhile. Siyazi ukuba yindlela enzima, nangona kunjalo, umvuzo lusindiso ngonaphakade.
Ukuba ngoku ufuna ukwazi yintoni injongo yobomi ngokutsho kwebhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.